"IArcadia" nguIain Pears ipapashwe ngoMatshi 7 | Uncwadi lwangoku
"IArcadia" nguIain Pears ipapashwe ngoMatshi 7
Umbhali wase-Bhritane Iain Amapheya inoveli entsha, kwaye eSpain iya kupapashwa ngu-Edpasa yoHlelo ngoMatshi 7. Ukuba uyathanda ukufunda iinoveli apho ifayile ye- umbono, la intsomi yesayensi, la inoveli emnyama kude kube eyonwabisayo yezopolitiko, awukwazi ukuyeka ukufunda "Arcadia".
1 Isishwankathelo kunye nezimvo
1.1 Uthini umgxeki?
1.2 Idatha yeNcwadi
2 Iinoveli zangaphambili zikaIain Pears
Isishwankathelo kunye nezimvo
IOxford Amashumi amathandathu eminyaka. UNjingalwazi uHenry Lytten uzama ukubhala iphupha elitsha eligqwesa umsebenzi wabo bangaphambi kwakhe, u-JRR Tolkien no-CS Lewis. Kwaye ufumana umntu othembekileyo kummelwane wakhe uRosie, intombazana eneminyaka eli-15 ubudala. Ngenye imini, ngelixa wayegxotha ikati yenjingalwazi, uRosie ufumana umnyango kwigumbi lakhe elingaphantsi, eliza kumkhokelela kwilizwe eliyimfama, elibizwa ngokuba yiAnterworld, ngumhlaba otshiswe lilanga ngababalisi bamabali, iziprofeto kunye namasiko.
Kodwa ngaba eli lizwe liyinyani? Kwaye xa ethatha isigqibo sokuhlala? Njengokuba eqala ukonwaba okungambuyisela ekhaya, elebhu, isazinzulu esikhohlakeleyo sizama ukubonisa ukuba ixesha (elidlulileyo, elangoku nelizayo) alikho, elinokubakho neziphumo ezinokubakho. .
Kumaphephandaba ahlukeneyo kunye neemagazini unokufumana ezi zimvo zilandelayo, kakhulu ukuba uzithathele ingqalelo, ngendlela:
"Ipaki yemixholo apho ungonwaba khona ngeentsomi, imixholo kunye nezinto ezenziwayo ezithathwe kwiinkulungwane zefantasy kunye noncwadi lothando" (Ezizimeleyo).
"Umboniso omnandi kakhulu […] Amaphepha eArcadia ajika ngokulula kwaye kuyonwabisa ukuzama ukuthelekelela ngokuchanekileyo ukuba amazwe awo ahlukeneyo ahambelana njani" (UMgcini).
Le ncwadi ibonakala ixelela abafundi bayo: fumana indlela yakho eya ekhaya. Kwaye ngethamsanqa ngeemephu ozotywe apha endleleni » (INew York Times).
“Ukonwaba nokuzonwabisa. Ipere yamapere kufanelekile kumzamo » (UKirkus).
Ingqokelela: Ibali le Espasa
Amaphepha: 640 iphepha.
PVP: I-22,90 €
Iinoveli zangaphambili zikaIain Pears
I-Iain Pears yaqala kwihlabathi loncwadi kunye neenoveli ezimfutshane zolwaphulo-mthetho, ezisi-7 ngokukodwa. Nangona kunjalo, ezi azizange zibonwe de kube ngo-1997 wapapasha ibali lakhe eliyinyani lokuqala, elinesihloko esithi «Inyaniso yesine ». Yamkelwa kakuhle ngabagxeki kangangokuba yahlelwa njengomsitho woncwadi, yade yayenza ukuba ibe kuludwe oludumileyo lwe NgeCawa yamaXesha yeencwadi ezilungileyo zonyaka. Oku akuzange kumenze ayeke, kodwa ngokuchaseneyo: yayililitye lokunyathela kude kube yincwadi yakhe yesibini «Iphupha likaSpipio », yapapashwa ngo-2003.
Namhlanje, i-Iain Pears ithathwa njengenye ye ababhali beenoveli ezifanelekileyo zembali zokurhanelwa namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » "IArcadia" nguIain Pears ipapashwe ngoMatshi 7
_Ukukhululwa_, nguJohn Hart. Kufuneka ufundelwe abathandi bobugebenga.
Iingcebiso ezili-10 zokubhala xa useluhambeni